GRIMME: ọhụrụ REXOR — Potato System Magazine
в News, Akụkọ ụlọ ọrụ, Omume / Etu, Injinia / Teknụzụ
REXOR 6300 nwere 653 hp nwere ihe mbuli diski ọhụrụ yana n'ihu defoliator FM
Emezigharị mpaghara REXOR kpamkpam maka oge owuwe ihe ubi 2022. REXOR 6200 ọhụrụ nwere 30 m³ hopper na REXOR 6300 nwere 45 m³ hopper na-ese ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe na ọtụtụ mmepe iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ.
Ọdịdị ọhụrụ nke onye na-ebuli elu, usoro nchịkwa na nkwado nke mepere emepe na-enyere onye ọkwọ ụgbọ ala aka, yana nhazi ọhụrụ, setịpụrụ ụkpụrụ ọhụrụ n'ihe gbasara ike, akụ na ụba na nkasi obi.
A kwadebere stubbler ọhụrụ ahụ dị ka ọkọlọtọ nwere igwe na-ehicha ihe asaa maka ihicha nke ọma na nke ọma. N'ihi etiti ahụ dị n'èzí, onye ọkwọ ụgbọ ala nwere echiche zuru oke nke tebụl roller na ngwaọrụ egwu dum.
Ma onye na-ebuli diski na onye na-ebufe vibratory nwere draịva na-enweghị mmezi yana ihe nrụpụta ọhụrụ na-adịghị na-arụ ọrụ mgbe niile na-arụsi ọrụ ike na oke ọsọ n'ihi ịdị arọ ya dị ala.
A na-eduzi ụdịdị dị iche iche nke defoliator ugbu a site na skids n'ihu rola defoliator, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-emebi emebi mgbe niile na nke kachasị mma ma na-ebelata iyi.
Onye ọrụ ubi ọhụrụ ahụ nwere rollers asaa na-ehicha ya na tebụl rola, ndị na-ebuli diski na defoliator jikọtara ọnụ.
Igwe egwu diski ọhụrụ
Ụdị ọhụrụ ahụ nwere ntuziaka beet 4 kama ịbụ 2, nke a na-ejikwa dị ka ntụziaka dị elu, si otú a na-enweta ọbụna ntụziaka ziri ezi karị n'usoro na nduzi n'ogo kachasị elu. Nke a na-eme ka ọrụ onye ọkwọ ụgbọ ala dị mfe ma na-emezi nzaghachi njikwa autopilot mgbe a na-atụgharị ya. N'ihi echiche ọhụrụ a nke nduzi dị elu, enweghi ike nke wheel wheel n'etiti defoliator na onye na-ebuli diski nwere ike ugbu a. Nke a na-eme ka ọhụhụ nke onye na-ebuli elu dịkwuo mma, na-ebelata ibu nke onye na-egwupụta ihe ma na-ebelata iyi.
Ịwụnye ihe na-ebuli diski na ọnọdụ ọrụ na-eme ka ọrụ nchekwa na ergonomic rụọ ọrụ
Ihe niile dị na anya ma dị maka ọrụ ozugbo
REXOR ọhụrụ ahụ nwere njikwa njikwa ISOBUS CCI 1200 yana sistemụ vidiyo GRIMME SmartView. Na mgbakwunye, gburugburu GRIMME Digital Interface (GDI) na-arụ ọrụ na-enye onye ọkwọ ụgbọ ala nkọwa ka mma nke akụkụ igwe nwere ike ịgbanwe.
Site n'enyemaka nke sistemụ GRIMME SmartView yana njiri pụrụ iche dị ka "Slow-Motion", onye ọrụ nwere ike ịkpọghachi onyonyo vidiyo ọ bụla na nwayọ nwayọ site na oge na-ebuli elu iji jikwaa nsonaazụ nke ọrụ ugbu a nke ọma.
Iji ọrụ mbugharị, onye ọrụ nwere ike họrọ akụkụ nke onyonyo a ga-egosipụta n'onwe ya.
Maka ntụle n'otu oge nke onyonyo vidiyo niile dị mkpa, onye ọrụ nwere ike igosipụta ihe onyonyo igwefoto 12 na ihuenyo mmetụ inch iri na abụọ.
Njikwa ọhụrụ site na CCI 1200 nwere sistemụ vidiyo dijitalụ SmartView ọhụrụ
Njikọ na myGRIMME
Emebere REXOR ọhụrụ dị ka ọkọlọtọ nwere ngwaọrụ telemetry na-enye gị ohere ijikọ na ọnụ ụzọ ndị ahịa myGRIMME.
Modul Ozi Live na-egosiputa maka onye ọrụ ọganihu ọrụ ugbu a na kọmpụta ma ọ bụ na ngwaọrụ mkpanaka njedebe ọ bụla ọzọ. Nke a na-emepụta uru mgbe ị na-eme atụmatụ logistics nke mbupụ ngwaahịa ma ọ bụ na-eme atụmatụ iji igwe ọzọ eme ihe.
Modul "myJobs" na-ede akwụkwọ na-akpaghị aka ma chekwaa ọrụ n'usoro oge. Ọrụ ọ bụla na-echekwa parampat dị ka oge ọrụ, ọnụ ahịa, na usoro usoro ọrụ nke onye ọ bụla. Na mgbakwunye, mgbe njedebe nke ọrụ ahụ gasịrị, ọ ga-ekwe omume ịchekwa data ndị ọzọ dị ka aha ndị ahịa na aha ubi. Enwere ike iji data emepụtara emechaa na sistemụ Ugbo-Management wee si otú a nye ntọala kacha mma maka mgbako. Ijikọ na myGRIMME na-emepụta ngwa ngwa ọrụ ugbo AGRARMONITOR, nke ndị ọrụ ngo na ndị na-akụ ihe nwere ike ijikwa ma detuo ọrụ ha n'ụzọ dị mfe.
Ịtụkwasị obi nke ọrụ na ọnụ ahịa gbakọọ
Ọnọdụ dị ugbu a n'ahịa shuga n'ụwa dị mgbagwoju anya ma sie ike ịkọ. Iji nye ndị ọrụ ntụkwasị obi kachasị arụ ọrụ na ihe egwu itinye ego na-achịkwa, a na-enyekwa ọgbọ ọhụrụ REXOR akwụkwọ ikike afọ 4. Ngwungwu a, nke a na-enye maka oge mbụ, na-akwadokwa ya site na nhọrọ mgbazinye na-aba uru na mgbanwe. Na mgbakwunye na ngwugwu ọrụ, nke a na-ekwe nkwa ihicha nke ọma. N'ihi nke a, REXOR ọhụrụ ahụ erutela ọkwa mmepe ọhụrụ, ọ bụghị naanị na nkà na ụzụ, kamakwa n'ụzọ akụ na ụba.
Tags: REXORNgwa GRIMME
All-Russian Research Institute of Phytopathology - afọ 60!
Azerbaijan nwere ike ibu onye na-ebubata poteto na Kazakhstan